फिल्म एश्वर्यको प्रेस शो सम्पन्न, कस्तो आयो त प्रतिक्रिया ? (भिडीयो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्म एश्वर्यको प्रेस शो सम्पन्न, कस्तो आयो त प्रतिक्रिया ? (भिडीयो)
फिल्मी फण्डा । वैष्णु देवी फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म एश्वर्यको प्रेस शो बिहीवार राजधानीमा सम्पन गरिएको छ । चलचित्रकर्मी र सञ्चारकर्मीको बिचमा ग्राण्ड प्रेस शो सम्पन गरिएको हो । उक्त शो उल्लेख्य रुपमा चलचित्रकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
चलचित्र हेरिसकेपछि चलचित्रकर्मी तथा अडियन्सहरुले नेपाली फिल्म पनि बलिउड फिल्म हेरेको जस्तो महसूस भएको बताए । चलचित्र ब्रास्लेट पछि पर्दामा देखिएको रमेश उपे्रती, डब्यू नायिका दीपिका प्रसाई, नायिका केकी अधिकारी र प्रशान्त ताम्राकारको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् ।
सम्पूर्ण पत्रकार र अडियन्सले चलचित्र अत्यन्तै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निर्माता अर्जुन श्रेष्ठ र किरण राणा उप्रेतीको लगानी रहेको फिल्ममा निर्देशन भने दिवाकर भट्टराईको रहेको छ । फिल्म कार्तिक ९ गते छठ पुजाको दिनदेखी अल नेपाल प्रदर्शन भएको हो ।